Maxaa ka jira in ciidamada dowladda ay dhac ka billaabeen BeledXaawo? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira in ciidamada dowladda ay dhac ka billaabeen BeledXaawo?
Maxaa ka jira in ciidamada dowladda ay dhac ka billaabeen BeledXaawo?
BeledXaawo (Halqaran.com) – Ciidamadii ay Dowladda Soomaaliya u daabushay Degmada BeledXaawo ee Gobolka Gedo ayaa lagu eedeeyay inay durbaba dhac ka billaabeen degmadaasi, xilli ay maalmo qura jooggaan.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Jubbaland, Cabdinuur Ibraahim Xuseen ayaa Ciidamada Dowladda ku eedeeyay inay dhibaato ka wadaan Degmada BeledXaawo.
Cabdinuur Ibraahim Xuseen ayaa sheegay inay tani muujineyso dhac uu ku eedeeyay inay durbaba kula kacayan bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmadaasi, sida uu yiri.
Afhayeenka ayaa intaa ku daray inay Ciidamada Dowladda qalqal ku hayaan dadka reer BeledXaawo, oo sida uu sheegay ku noollaanayay amni iyo xasilooni, in muddo ahba.
Cabdinuur Ibraahim Xuseen, Afhayeenka Wasaaradda Amniga Jubbaland ayaa ka digay in amnigii ay haysteen dadka reer BeledXaawo loogu bedelo mushkilad, ay ugu horeyso nabadgelyo-darro.
Cabdinuur Ibraahim oo la hadlay Radio Kulmiye ayaa Dowladda Federaalka ugu baaqay in ay joojiso dhibaatada ay masuulka ka tahay ee ay ciidamadeedu ka wadaan Gobolka Gedo.
Goobo badan oo ay horey ula wareegeen Ciidamada Dowladda ayaa siyaabooyin kala duwan looga soo wariyay in ay ka gaysteen falal isugu jira dil, dhac iyo kufsiba.
Maxaa ka jira in ciidamada dowladda ay dhac ka bilaabeen BeledXaawo?